Barcelona, Real Madrid, Man United iyo Bayern Munich Oo Caydhinaya Tababareyaashooda | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Barcelona, Real Madrid, Man United iyo Bayern Munich Oo Caydhinaya Tababareyaashooda
(08-10-2018) Shanta kooxood ee ugu waaweyn dunida ayaa toddobaadkan isku diyaarinaya xaalad adag oo ay ku beddelayaan macallimiintooda kaddib dhibaatooyin guulo la’aan iyo khasaare ah oo iskugu xig-xigay.
Jose Mourinho oo ah tababaraha ugu hadal haynta badan leh macallimiinta ay shaqadoodu halista ku jirto, ayaa waxa uu hoggaaminayaa liiskan, hase yeeshee waxa uu garab ka helayaa oo caydhinta la wadaagaya afar macallin oo kale oo la qaybsan doona indhaha warbaahinta ee markii hore kaligii hayey.
Tababaraha ugu horreeya ee la caydhin doono ayaa la tilmaamay inuu yahay macallinka Bayern Munich ee Kovac oo afartii ciyaarood ee ugu dambeeyey laga badiyey, isla markaana ay qaar ka mid ah ciyaartooyadiisa oo uu ku jiro James Rodriguez ay isku dhaceen.
Bayern Munich ayaa sabtidii guul darro qadhaadh kala kulantay Borussia Mönchengladbach, waxaana uga sii horreeyey saddex guul-darro oo kale oo ay u xambaariyeen Augsburg, Ajax iyo Hertha Berlin, waxaana la sugayaa in maamulka sare ee naadigu uu qaato go’aankii uu Carlo Ancelotti shaqada kaga caydhiyey xili ciyaareedkii hore oo badhtamaha maraya oo kale.
Kooxda labaad ee macallinkeeda caydhin karta ee Manchester United oo inkasta oo ay guul layaab leh kasoo hoysay ciyaartii Newcastle, haddana aanay wanaagsanayn sansaanta ka muuqata Old Trafford, waxaana la filayaa in ugu dambayn dhamaadka bishan uu Jose Mourinho shandaddiisa ka qaadan doono Red Devils.
Real Madrid ayaa iyaduna gashay xaalad cakiran, waxaana ay afartii ciyaarood ee ugu dambaysay la deristay laba guul-darro iyo laba barbardhac, waxaana ka daran in xattaa hal gool aanay dhalinin.
Tababare Julen Lopetegui ayaa Sabtidii qirtay in xaaladda kooxdiisu adag tahay, waxaanu ka dalbaday taageereyaasha inay u samraan, hase yeeshee, madaxweyne Perez ayaa caan ku ah in marka ay kubaddu dafirto tababaraha uu si degdeg ah dariiqa ugu rido.
Kooxda afraad ee ka fikiraysa beddelka tababaraheedu waa Barcelona oo afar ciyaarood oo horyaalka ah aan guuleysanin, kuwaas oo hal guul-darro iyo saddex barbar dhac ah soo xareeyey.
Tababare Ernesto Valverde ayaa kasoo muuqday liiska tababareyaasha ay shaqadoodu halista ku jirto, waxaana wararka laga helayo Spain ay sheegayaan in maamulka kooxdu uu lumiyey kalsoonidii ay ku qabeen.